Taabid Cabdi Maxamed oo fariin ku aadan heshiiskii Dhuusamareeb u diray BF - Caasimada Online
Home Warar Taabid Cabdi Maxamed oo fariin ku aadan heshiiskii Dhuusamareeb u diray BF
Taabid Cabdi Maxamed oo fariin ku aadan heshiiskii Dhuusamareeb u diray BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, Taabid Cabdi Maxamed oo war qoraal ah soo saaray ayaa ka hadlay heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb ee caasimada Galmudug.
Taabid oo haatan ah hoggaamiyaha Xisbiga Awooda Shacabka ayaa sheegay inuu marka hore soo dhoweynayo qodobadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 ee ay yeesheen Madaxweynaha dowladda Soomaaliya, Madaxweynayaasha maamullada Koonfur Galbeed, HirShabelle, Galmudug oo marti loo ahaa iyo duqa magaalada Muqdisho.
Sidoo kale wuxuu fariin u diray xildhibaanada labada Aqal ee Baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya isaga oo ka dalbaday in heshiiskaas ay si wadajir ah u turxaan bixiyaan.
Ugu dambeyn wuxuu soo jeediyey afar qodob oo dhameystir u baahan, si loo dhaqan geliyo heshiiska lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb.
Halkan hoose ka aqriso qoraalka
Qodobbada Shirka Dhuusamareeb3 waxey u muuqdaan iney meesha ka saareen hubanti la’aantii doorashada, wacyiga in wax lagu qaatay iyo ugu dambeyn in tanaasul la muujiyay, waana boogaadineynaa.
Sidoo kale, waa tallaabo dhiirigalin mudan in meel dhexe la isugu yimid, shacabka Soomaaliyeedna tiro ka badan kuwii hore fursad u helaan ka qeyb qaadashada doorashada 2020/2021 iyada oo loo marayo nidaamka Xisbiyada badan.
Ugu dambeyn, waxaan ku baaqeynaa arrimaha soo socda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameystiro si heshiiskan hirgelintiisu u bilowdo.
1. Tirada Aqalka Sare ee 2020/2021 in lagu caddeeyo nuqulka heshiiska inuu noqon doono 67 Senator inta aan la horgeyn Golayaasha, maadama matalaaadda 13 Senator ay Banaadir si sharci ah u yeelatay.
2. In Puntland iyo Jubbaland labadaba fursad loo siiyo wixii talo ah oo ay ku biirin lahaayeen heshiiska doorasho ee Dhuusamareeb3.
3. Maamulka Doorashada 2020/2021 hadii ay maamulayaan GMDQ waa arrin wanaagsan balse u baahan tallo-loo dhanyahay si aan loo siyaasadeyn go’aannada iyo qorshooyinkooda.
4. In heshiiska doorasho ay labada Aqal ee Barlamaanka Soomaaliyeed wadajir u turxaan bixiyaan, gaar ahaan meelaha u baahan kabidda una ansixiyaan.